Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay – STAR FM SOMALIA
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa gelinkii dambe ee maanta dalka dib ugu soo laabtay, ka dib booqasho ay ku taggeen dalalka Kenya, Mareykanka iyo Malta. Waxaana ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Muqdisho masuuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda, Saraakiil iyo dadweyne kale.
Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid oo faah-faahin ka bixiyay socdaalkiisa, ayaa sheegay in uu ka qeyb galay shirar muhiim u ah Soomaaliy. Isagoo xusay intii uu joogay dalka Kenya uu booqday Xerada ugu weyn Qaxootiga Adduunka ee Dhadhaab halkaas oo kula kulmay dadkii Soomaaliyeed ee daganaa, iyadoo uu xusay R/Wasaaruhu in uu arkay dad Soomaaliyeed u diyaarsan dalkooda in ay dib ugu soo laabtaan.
Dhanka kale Ra’iisal Wasaaraha, ayaa magaalada Nairobi kulan kula qaatay Madaxweynaha dalkaas Uhuru Kenyatta, waxana ay ka wada hadleen xiriirka labada dalka iyo arrimaha qaxootiga Somalida.
“Waxaan booqday xeryaha qaxootiga Dhadhaab, waxaan u kuurgalnay xaaladaha ay ku suganyihiin dadkeennu, runtii waxaan halkaas ku soo aragnay dad ay ka go’antahay in ay dalkooda kusoo laabtaan dadkoodana wax la qabsadaan”. Ayuu yiri R/Wasaare Cumar.
Sidoo kale Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, ayaa sheegay in magaalada New York ee dalka Mareykanka uga qaybgalay shirka Golaha Ammaanka Qaramada Midoobe, kaas oo looga hadlayay arrimaha Somaliya. Waxaana shirkaas diiradda lagu saaray Hiigsiga 2016 iyo sidii loo dar dargelin lahaa dhamaystirkiisa, iyadoo dhanka kale dowladda Somaliya lagu ammaanay horumarka ay sameysay muddooyinkii la soo dhaafay.
Ra’iisal Wasaare Sharmaarke, ayaa sheegay in guul uu ku soo dhammaaday shirkii looga hadlayay yaraynta qulqulka muhaajiriinta ka soo tallaabaya badda Mediterranean-ka ee kasoo cararaya faqriga ka jira qaaradda. Iyadoo uu Ra’iisal Wasaaruhu shirka ka soo jeediyey in wax laga qabto sababaha keenaysa qulqulka muhaajiriinta.
Sharmaarke, ayaa tibaaxay in 28-ka dal ee Qaaradda Yurub ay sannadkiiba bixin doonaan 20-bilyan oo Euro, taasoo lagu caawinayo Wadamada Qaarada Afrika. Waxaana dhaqaalahan lagu bixin doonnaa mashaariic ay ka mid yihiin tababarro, ganacsiyada yar-yar ee dadka Afrika loo samaynayo, ka hor-tagga cunno yarida, joojinta tahriibka, ka hortagga xajirnimada iyo colaadaha.
Wararkii ugu danbeeyey Xaalada magaalada Galkacyo ee gobalka mudug
Madaxweynaha ayaa Xarunta Madaxtooyada waraaqihii aqoonsiga kaga guddoomay Danjiraha cusub ee dalka Jamhuriyadda India